Wararkii ugu dambeeyay dhacdadii naxdinta lahayd ee hooyada ilmaha laga xaday - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wararkii ugu dambeeyay dhacdadii naxdinta lahayd ee hooyada ilmaha laga xaday
Hooyo Naciima Maxamed oo ah hooyada laga xaday ilmaheeda koowaad oo ku dhashay si aad u rafaadsan maadaama dhiigkar ku soo booday xilligii ay uurka lahayd ayaa la sheegay inay xaalad aan wanaagsanayn oo naxdin aan la qiyaasi karina ku jjrto.
Naagta arxanka daran ee la tuhmaayo inay ka hoos qaaday hooyada rafaadsan ee yara seexatay ayaa la sheegay shalay oo dhan inay ku sugnayd Isbitaalka Soos gudihiisa, gaar ahaan qolka la seexiyay Hooyo Naciimo oo waxa ay gacanta ku wadatay bacda Hooyooyinka marka ay umulaan loo dhigo.
Naagtan ayaa la ogaadey markii dambe inay socoto ahayd oo ayna ka mid ahayn shaqaalaha isbitaalka halka dadkii ag-jiifay hooyo Naciimo ay u qabeen inay iyaga la socoto.
Markii albaabka isbitaalka la xirey waala waayay meel ay martey ayuu yiri ilmaha la xaday awoowgiis. Naagtaas ilmaha xaday ayaa iska dhigeysay qof ehelka ah oo xitaa caawimaad ayeey u fidinaysay reerka.
“Arintaan baroordiiq ka weyn ee waxaan cidkasta oo Soomaali oo na maqlaaya u sheegaynaa in naagtaas haddii aan taqaanaan u sheegtaan inay si nabadda ilmahaas hooyadeed ugu soo celiso maadaama xaaladeedu wanaagsanayn. Adeer Ilaahaaga ka cabso oo ilmahaas iska soo celi ayuu yiri Maxamuud Sh Axmed Maxamed oo ah wiilka la xaday awoowgiis.
Maamulka degmada isbitaalku yaalo ayaa iyaguna bilaabay baaritaan saaida si ilmahaas yar hooyadii ugu soo celiyaan. Ilmaha la xaday ayaa saacado kaliya jirey markii hooyadii Naciimo rafaad ku dhashay.